Bowel Incontinence (ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bowel Incontinence (ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ)
Bowel Incontinence (ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ) ကဘာလဲ။
ဝမ်းမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတာ အူရွေ့လျားမှုတွေမူမမှန်တော့တဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ပါ။ ပုံမှန်လူတွေမှာဆို အူတွေက လှုပ်ရှားနေကျအတိုင်း လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝမ်းမထိန်းနိုင်တဲ့လူတွေမှာတော့ ညဘက် မစင်ယိုစိမ့်ထွက်ခြင်း အဖြစ်များပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့စားသောက်ပြီးနောက်မှာ မချေဖျက်ရသေးတဲ့အစာတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ အကျိအချွဲတွေနဲ့ ဆဲလ်သေတွေ ပေါင်းပြီး အစိုင်အခဲပုံစံကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ယင်းအရာကိုတော့ မစင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ထို့နောက် အူတွေကို ဖြတ်သန်းပြီး စအိုကနေ ခန္ဓါကိုယ်အပြင်ဘက်သို့ စွန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ယင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို အူရွေ့လျားခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ အူရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့အခါမှာ ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဝမ်းသွားရမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ထိန်းထားရမယ်ဆိုတာ မသိတော့တာကြောင့် ကသိကအောက်ဖြစ်ရပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းက ဆိုးဆိုးရွားရွားရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပဲ ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
Bowel Incontinence (ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက်အရွယ်မရွေး တော်တော်လေးအဖြစ်များပါတယ်။ အန္တရယ်ရှိအချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Bowel Incontinence (ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခါတွေဟာ ပြတ်ပြတ်သားသားရှိပါတယ်။ ဝမ်းတစ်စိမ့်စိမ့်ထွက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ချီးထွက်ကျခြင်းတို့က အဓိကရှာဖွေသင့်တဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။ ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းက အခြားရောဂါတွေနဲ့တွဲတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်မယ် ဒါမှမဟုတ် ဝမ်းသွားနေမယ်ဆိုရင် ဝမ်းမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာဟာ ကွယ်ပျောက်နေတတ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို နှောက်ယှက်နေပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ပြသင့်ပါပြီ။ သင့်ကိုယ်သင်မယုံပါနဲ့။ စအိုပိတ်ကြွက်သားမထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် ပြဿနာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာတွေ ရှိမယ် ဒါမှမဟုတ် မေးစရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ ခန္ဓါကိုယ်တွေမတူကြပါဘူး။ မိမိအအခြေအနေအတွက် ဘာကအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ဖြင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Bowel Incontinence (ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
စအိုထိန်းကြွက်သားတွေ ပျက်စီးခြင်းက အဖြစ်များတဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပါပဲ။ စအိုထိန်းကြွက်သားဆိုတာ စအိုတဝိုက်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေဖြစ်ပြီး စိတ်သဘောအတိုင်း ကျုံ့နိုင်၊လျော့နိုင်ပါတယ်။ ယင်းကြွက်သားတွေ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့ အာရုံကြောတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အခါ မစင်များယိုစိမ့်ကျနိုင်သလို အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ ဝမ်းလုံးဝမထိန်းနိုင်တော့တာပါပဲ။
အခြားအကြောင်းအရင်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဝမ်းလျောခြင်းတွေလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အူလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အူရောင်ခြင်းက အစာခြေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးမှုရှိနေတာကြောင့် သူ့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကြွက်သားတွေ သူ့အလိုလို ဆန့်လိုက်သလိုမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အယ်ဇိုင်မားရောဂါကြောင့်လည်း အူလှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းစဉ် ချို့ယွင်းနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Bowel Incontinence (ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
လူအများစုဟာ ဘဝမှာတစ်ခါလောက်တော့ ဝမ်းမထိန်းနိုင်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဝမ်းလျောခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းတို့နဲ့ တွဲလာတတ်ပါတယ်။ ခွဲမမွေးဘဲ ရိုးရိုးတန်းတန်းမွေးတဲ့ မိန်းမတွေမှာဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ဆရှိပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာရင် ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ဝမ်းရောဂါအခြေအနေတစ်ချို့ကြောင့် လူကြီးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။
Bowel Incontinence (ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဘာတွေက ဒုက္ခပေးနေတာလဲဆိုတာ သိရှိဖို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စအိုထိန်းကြွက်သားတွေ ကောင်းမကောင်းသိရှိဖို့ စအိုအတွင်းသို့ လက်ထိုးကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ မစင်အားဓါတ်ခွဲကြည့်ခြင်းနဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင့် တစ်လျောက်ရှိ ပြဿနာများသိရှိစေဖို့ စအိုအတွင်း မှန်ပြောင်းထည့်ကြည့်ခြင်းလိုမျိုး အခြားစစ်ဆေးနည်းလမ်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အာရုံကြောထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိမရှိလည်း စစ်ဆေးမှာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ စအိုနဲ့ အူမကြီးနံရံတွေမှာ ပြဿနာရှိမရှိကို အာထရာဆောင်းရိုက်ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
Bowel Incontinence (ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လူနာ့အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသနည်းတွေရှိသလို၊ ခွဲစရာမလိုတဲ့ ကုသနည်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ခွဲစရာမလိုတဲ့ ကုသနည်းတွေကတော့ ဆေးသောက်ခြင်း၊ စားသောက်ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ ရေများများသောက်ခြင်း၊ အူလှုပ်ရှားမှုကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ ပုံမှန်အချိန်လေးတစ်ခုထားရှိခြင်း အစရှိသဖြင့်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်နည်းလမ်းတွေနဲ့ မကုသနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်ကုသဖို့ ဒါမှမဟုတ် အသေးစားထိုးဖောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီး။
အောက်ပါလူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
မိမိဘာတွေ စားသောက်လဲဆိုတာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး စားသောက်ပုံစံပြောင်းလဲပါ။ အမျှင်ဓါတ်လုံလုံလောက်လောက်စားပါ။ ရေများများသောက်ပါ။
ဝမ်းမထိန်းနိုင်တဲ့လူများအတွက် အောက်ပါတို့က လက်တွေ့အသုံးဝင်မယ့် အချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား၁ သေးခံအောက်ခံဘောင်းဘီဝတ်ပါ ဒါမှမဟုတ် ပတ် အသုံးပြုပါ။
မထိန်းနိုင်ဘဲထွက်ကျရင် လဲဝတ်ဖို့ သန့်ရှင်းတဲ့ အဝတ်အစားတွေ ယူဆောင်သွားပါ။
ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ အများသုံးသန့်စင်ခန်းတွေကို ရှာဖွေထားပါ။
အနံ့အသက်တွေ လျော့ချဖို့ ဆေးများအသုံးပြုပါ။
မေးစရာတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းလမ်းတွေကို ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်စေရန်အတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Bowel Control Problems (Fecal Incontinence).
https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/fecal-incontinence/Pages/facts.aspx . Accessed October 23, 2016.